सलाम युगपुरुषहरु ! – eratokhabar
ई-रातो खबर २०७४, ११ पुस मंगलबार ०४:५९ December 6, 2021 1278 Views
माओले आफ्नो जीवनको उत्तराद्र्धमा देशभित्रै संशोधनवादको सामना गर्नुपरेको थियो । लिन प्याओको षड्यन्त्र असफल पार्नुपरेको थियो भने आफ्नै आ“खाअगाडि सोभियत सङ्घमा प्रतिक्रान्ति देख्नुप¥यो । त्यसको प्रभाव चीनमा परेको थियो । क्रान्तिपछि पनि देशभित्र पछौटे उत्पादनप्रणाली, सामन्ती चिन्तन र संस्कृति तथा देशबाहिर साम्राज्यवादले क्रान्तिका विरुद्ध हमला गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि उहा“ले अनुभूत गर्नुभएको थियो ।
फरकफरक भौतिक अवस्थाले सोच्ने तरिकामा पनि फरक ल्याउँछ । तर लेनिन र स्टालिनमा त्यस्तो समस्या कहिल्यै आएन । महान् लेनिनको असामयिक निधनपछि हिटलरको नेतृत्वमा बेलायत र अमेरिकाको अप्रत्यक्ष सहयोगमा समाजवादी शिविरको केन्द्र सोभियत सङ्घमाथि आक्रमण भयो । हिटलरसँगको लडाइँको अग्रीम मोर्चामा स्टालिन आफैँ भिड् नुभयो । युद्धमा स्टालिनका छोरा हिटलरको कब्जामा परे । हिटलरले जर्मनीका बन्दीसँग स्टालिनका छोरा साट्ने प्रस्ताव ग¥यो तर स्टालिनले हिटलरको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभयो । तत्कालीन राजधानी पिटर्सबर्गमा मात्रै लाखौँको बलिदान भयो । हिटलरलाई सोभियत सङ्घले पराजित मात्र गरेन, पूर्वीयुरोपभरि क्रान्तिको विस्तार भयो । उहाँले सर्वहारा वर्गको अधिनाकत्वलाई दह्रोसँग लागू गर्नुभयो । समाजवादी सत्ताको निर्माण गर्नुभयो । आज स्टालिनलाई हेर्ने प्रश्न संशोधनवाद र माक्र्सवादका बीचको मानक प्रश्न बनेको छ । … … विश्व सर्वहारावर्गका महान् नेता तथा गुरु हुनुहुन्छ माओ त्सेतुङ । उहाँ निम्नमध्यमवर्गको परिवारमा हुर्किनुभएको थियो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी रुसी नेतृत्वबाट प्रभावित थियो । तर माओ भने चीनको क्रान्ति रुसी बाटोबाट नभएर मौलिक ढङ्गले गर्नुपर्ने ठान्नुहुन्थ्यो । लामो समयसम्म माओ अल्पमतमा पर्नुभयो, जसमा स्टालिनको गलत सुझावले काम गरेको थियो । लामो समयपछि स्टालिनले चीनप्रतिको आफ्नो धारणा सच्याउँदै माओ कार्यदिशालाई सहयोग गर्नुभएको थियो ।
२०३० को दशकमा भयानक क्षति बेहोर्नुपरेपछि माओ बचेखुचेको शक्ति लिएर ‘लम्बे अभियान’ मा निस्कनुभयो । उहाँले किसान र ग्रामीण क्षेत्रमा आधारित दीर्घकालीन जनयुद्धको कार्यदिशा विकसित गर्नुभयो । किसान आधारित जनमुक्ति सेना निर्माणको अवधारणा नयाँ जनवादी क्रान्ति, सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिजस्ता मौलिक विचारहरूको प्रयोग र आविष्कार गर्नुभयो । माओको नेतृत्वमा सुरुमा जापानी साम्राज्यवाद र त्यसपछि अमेरिकी साम्राज्यवाद पराजित भयो । कोरियाबाट जापान पछाडि हटेपछि अमेरिका ढाल बनेर उभिएको थियो । कोरियाको युद्धमा माओका छोरा सहभागी थिए । त्यहीँ उनको मृत्यु भएको थियो । माओकी जीवनसँगिनीको युद्धमै मृत्यु भएको थियो । १९४९ मा चीन मुक्त भएको थियो । १९५६ मा माओले १५ वर्षमा हामीले बेलायतलाई उछिन्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । ‘राजनीतिलाई समात, उत्पादन बढाऊ’ माओको नीति थियो । यही वर्ष सोभियत सङ्घर्षमा खु्रस्चोभले प्रतिक्रान्ति ग¥यो । चीन–सोभियत सङ्घ विवाद चर्कियो । माओले क्रान्तिकारी माक्र्सवादको रक्षा गर्नुभयो र ख्रुस्चोभका विरुद्ध स्टालिनका विचार र कार्यको रक्षा गर्नुभयो । उहाँले स्टालिनबाट ७० प्रतिशत असल र ३० प्रतिशत कमजोरी रहेको संश्लेषण गर्दै ‘स्टालिनका महान् कार्यका अगाडि उहाँका नगण्य कमजोरी रहेका छन्’ भन्नुभएको थियो । माओ एकजना कवि तथा संस्कृतिकर्मी पनि हुनुहुन्थ्यो । ‘येनान गोष्ठीमा साहित्य र कलाको प्रवचन’ मा माओका साहित्यिक धारणा प्रस्तुत भएका छन्, जसलाई जनसाहित्यको मानक ठानिन्छ ।
माओले आफ्नो जीवनको उत्तराद्र्धमा देशभित्रै संशोधनवादको सामना गर्नुपरेको थियो । लिन प्याओको षड्यन्त्र असफल पार्नुपरेको थियो भने आफ्नै आँखाअगाडि सोभियत सङ्घमा प्रतिक्रान्ति देख्नुप¥यो । त्यसको प्रभाव चीनमा परेको थियो । क्रान्तिपछि पनि देशभित्र पछौटे उत्पादनप्रणाली, सामन्ती चिन्तन र संस्कृति तथा देशबाहिर साम्राज्यवादले क्रान्तिका विरुद्ध हमला गरिरहेको हुन्छ । केन्द्रीय सत्ता कब्जापछि पनि सत्ता छिनाझप्टी चलिरहन्छ र अन्तिम जित कसको ? भन्ने प्रश्न बाँकी नै रहने निष्कर्ष माओको थियो । त्यसैले उहाँले निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभयो, जसअनसार १९६६–१९७६ सम्म महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुभयो ।
चीनमा क्रान्तिपछि अमेरिकाले चीनलाई आणविक बमको धम्की दिएर आत्मसमर्पण गराउन चाहेको थियो । माओले त्यसलाई ‘कागजी बाघ’ भन्दै दुत्कार्नुभयो । २०६० कै दशकमा चीन आणविक शक्तिराष्ट्र बन्यो र चीनको उपस्थितिबिना संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नै असफल बन्ने भएपछि ताइवानको सदस्यता खारेज गरेर चीनलाई सदस्यता दिइयो । चीन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स र रसियापछि पाँचौँ विशेषाधिकार (भिटो) प्राप्त देश बन्यो । जर्मनी, जापान र भारत चीनभन्दा पछाडि परे । त्यो अमेरिकी चाहनाविपरीत थियो । माओले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो विश्वको अवधारणा प्रतिपादन गर्दै अन्तरसाम्राज्यवादी अन्तरविरोधको पनि संश्लेषण गर्नुभएको थियो ।
स्रोत :रातो खबर साप्ताहिक, पुस ५ गते मा प्रकाशित
नेकपा र क्रान्तिकारी माओवादीबीच क्रान्तिकारी ध्रुवीकरण पहल गर्ने निर्णय
१२५ औं माओ दिवस सम्पन्न